Isku Aadka Uefa Champions oo la sameeyay iyo Kooxo waa weyn oo isku aaday. – Cayaaraha dunida
Isku Aadka Uefa Champions oo la sameeyay iyo Kooxo waa weyn oo isku aaday.
Waxaa goordhaw magaalada Monoco ee dalka Faransiiska lagu sameeyay isku aadka Uefa Champions League, waxaana Madaxa la isku galiyay kooxo waa wen ,halka kooxaha qaarna ay galeen Guruubyo aad u sahlan.
Guruubka ugu adag ee tartanka Uefa Champions League waxaa kuwada jira kooxaha waa weyn ee ee PSG iyo Bayern Munchen , waxaa sidoo kale Guruubyada ugu adag tartanka kamid ah midka CI ay kuwada jiraan kooxaha Chelsea, Atletic Madrid iyo Roma.
Kooxaha ka socda dalka Ingiriiska gaar ahaan Liverpol, Mancheser United iyo Mancheter City ayaa ku jira guruubyo aad u jilicsan, waxaana sadexdan koox la sadaalinayaan in heerka Guruubyada kasoo gudbi karaan,
Halkan ka Akhriso sida kooxaha la isugu aadiyay
GROUP A: Benfica, Manchester United, FC Basle, CSKA Moscow